Iintsapho Wamkelekile: 3 Bdrm Suite 10 Min ukusuka e-I80! - I-Airbnb
Iintsapho Wamkelekile: 3 Bdrm Suite 10 Min ukusuka e-I80!
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguAndrew And Sandra
UAndrew And Sandra yi-Superhost
Yiza uchithe iintsuku zakho uthe zava! Igumbi lethu elingaphantsi elahlulahluliweyo linendawo eninzi kunabantu abaninzi abanokukholelwa - amagumbi amathathu okulala, ibhafu yabucala, kunye negumbi lokuhlala/indawo yesidlo sakusasa, zonke zifumaneka ngokwezidingo zakho zokuhamba. Sisekufutshane kuzo zonke iindawo ezinomtsalane, kwaye yimizuzu eyi-10 kuphela yokuqhuba ukusuka e-I80. Le ndawo yokuhlala izilungele iintsapho namaqela, ineyadi ebiyelweyo yabantwana yokudlala nepaki ekwiiblokho nje ezimbalwa. Yiza wenze iKearney ibe likhaya lakho usuku, iveki, okanye ngaphezulu!
Ikhaya lethu lakhiwe ngendlela eyahlulwe phakathi, kwaye mna nomyeni wam sihlala kakhulu kumgangatho ongasentla. Igumbi elingaphantsi linamagumbi okulala amathathu (amabini anezibane ezikhanyayo) kunye neebhedi ezine zizonke -- ibhedi enkulu enye, ibhedi enkulu, kunye neebhedi ezimbini ezidibeneyo. Ikwaqulethe nebhafu yabucala eneshawa nomatshini wokuhlamba nowokomisa impahla, kunye nekhabhathi enezinto zokuthambisa ezongezelelekileyo kwabo "balibele ukuyipakisha"! Indawo yethu yokuhlala/isidlo sakusasa ineDV ezininzi, iincwadi, kunye nemidlalo yebhodi yokuzonwabisa, kunye neTV yesikrini esineflethi eza kubukela iimuvi nezinye izinto ngeChromecast. Sinikezela ngesidlo sakusasa ngeziqhamo, iibhari zesidlo sakusasa, ubisi kunye necereal, kwaye sinefriji encinci kunye nefriji yokugcina ukutya, kunye neKeurig yekofu - yiza neepod zakho okanye ukhululeke ukusebenzisa eyethu! Igumbi elingaphantsi alinayo ikhitshi; kodwa ke, siye senza amalungiselelo kunye neendwendwe kwixesha elidlulileyo ukuze sizivumele ukuba zipheke zize zisebenzise ikhitshi nezinto zethu, ibe singakuvuyela ukukwamkela ngale nto.
Indawo yethu sisitrato esipholileyo, esinomthi, kwaye abamelwane bethu badla ngokuthatha umhlala-phantsi okanye iintsapho ezincinci. Ngqo kumantla endlu yethu kukho iindawo ezimbalwa zokungena kumangcwaba asekuhlaleni, apho abantu basekuhlaleni badla ngokuhamba okanye ukujoga, kwaye iiblokho eziyi-2 ukuya empuma yipaki enezixhobo zokudlala kunye neendawo eziliqela zebhola ekhatywayo kunye ne-softball. Singumantla wesitrato esiyi-39, esinye sezitrato zaseKearney, kwaye yimizuzu emihlanu kuphela xa sihamba ngemoto ukusuka kwiivenkile ezininzi zokutyela, indawo esedolophini kunye neevenkile zayo kunye neendawo zokutya, kunye neWalmart, iithagethi kunye neHyVee.
Umbuki zindwendwe ngu- Andrew And Sandra
Siyakuthanda ukudibana neendwendwe zethu kwaye sisoloko sifumaneka ngokobuqu okanye ngomyalezo ukuze siphendule imibuzo, sikwazi ukumelana neemfuno, size sikuncede ube nohambo olumnandi. Nangona kunjalo, sisoloko siphuma endlini, kwaye siyakuvuyela ukukunika indawo oyidingayo ukuze wonwabele ixesha lakho e-Kearney. Siza kubhalisela ukufika ngamaxesha athile, kodwa zama ukuqinisekisa ukuba sihlonipha isidingo sondwendwe ngalunye sokuba lube nemfihlo nendawo.
Siyakuthanda ukudibana neendwendwe zethu kwaye sisoloko sifumaneka ngokobuqu okanye ngomyalezo ukuze siphendule imibuzo, sikwazi ukumelana neemfuno, size sikuncede ube nohambo olum…